5 Faa'iidooyinka Caafimaadka adoo Sameeynaya Plank | Vondt.net
5 Faa'iidooyinka caafimaad adoo sameeynaya qashin-qubka
27 / 02 / 2016 /0 Comments/i tababarka/av waxyeelladayda
Jimicsigu maaha inay noqdaan kuwo dhib badan. Xaqiiqdii, xitaa jimicsiga ugu fudud ayaa bixin kara faa'iidooyin caafimaad iyo faa iidooyin waaweyn oo ku saabsan murqaha, kala-goysyada, jirka iyo maskaxda. Looxku waa jimicsi la yaqaan oo aad loo jecel yahay kaas oo lagu sameeyo iyadoo jirka kor looga qaadayo dhulka isagoo toosan u socda. Layligu waa fududahay in la sameeyo, laakiin wuxuu noqdaa mid aad u baahan markaad jagada hayso - runtiina waxaad ka dareemi doontaa muruqyada dambe, muruqyada asaasiga ah iyo murqaha caloosha.
Markaa faa iidooyinka aad ka faaiidaysanaysid adoo samaynaya qoryaha?
- Dhabar xanuun yar
Xanuunka dhabarku wuxuu si weyn u saameyn karaa shaqada maalinlaha ah iyo tayada nolosha. Hal dariiqo oo looga hortago dhibaatooyinka dhabarka waa iyadoo la tababaro muruqyada aasaasiga ah iyo muruqyada dhabarka - sidaan soo sheegnayna, si fiican ayaa loo tababbari doonaa markaad fuliso looxa. Taas oo iyaduna sababi doonta dhibaatooyin yar yar oo dhabarka ah.
- Niyad wanaagsan
Jirku wuxuu awood u leeyahay sida jimicsiga kale, inuu saameyn togan ku yeesho niyadda. Waxaa la sheegaa in looxaanku uu yahay kor u qaadida niyadda oo kale maxaa yeelay wuxuu si gaar ah u saameeyaa murqaha qaawan si wanaagsan. Layliga jirku wuxuu kaa caawin karaa inaad ka takhalusto xiisadda.
- Muruqyada caloosha oo aad u qeexan
Qorsheynta ayaa ah hab fiican oo lagu tababaro muruqyada muruqyada ee qotada dheer. Waa kuwan aasaaska u ah sabuuradda aad raadineysay. Caadi ahaan, tan waa in lagu daraa nafaqada habboon iyo jimicsiga - laakiin waa kaabis wanaagsan.
- Muuqaal iyo dheellitir ka wanaagsan
Layligu wuxuu u baahan yahay ka qayb qaadashada ku dhowaad dhammaan qaybaha muruqyada aasaasiga ah si ay si habboon u gutaan. Jimicsiyada horusocodka oo ah qaabka looxyada, plank side ama plank on ball therapy ayaa dhamaantood ah noocyo kaladuwan oo waliba caqabad ku noqon doona awoodaada isku dheelitirka. Haddii aad runtii rabto inaad ka hortagto dheelitirka, waxaan kuu soo jeedineynaa inaad ku sameyso loox dhinaca lugta leh - tani waa mid aad u baahan, laakiin waxay ku siin doontaa natiijooyin wanaagsan.
- Dabacsanaanta iyo dhaqdhaqaaqa
Dabacsanaantaada ayaa sidoo kale la xoojiyaa markaad sameysid qolka. Sidaad ogtahay marka aad jimicsiga sameyneyso, wuxuu si wanaagsan ugu tababari doonaa muruqyadaada iyo muruqyadaada. Waxay kaloo bixisaa jimicsiga ugu fiican ee xabadka, oo ay ku jiraan muruqyada ku wareegsan garbaha iyo garbaha. Jimicsi aagaggaasi waxay horseedi doontaa kordhinta wareegga dhiigga oo sidaas awgeed kordhinaysa dhaqdhaqaaqa.
- Gunaanad: looxa waa in la sameeyaa maalin kasta!
Looxku waa jimicsi fudud oo toos ah oo la samayn karo maalin kasta si uu kuugu hago wadada caafimaadka iyo muruqyada ka sii fiican. Sidaan soo sheegnay, waxay kaloo u horseedi kartaa isku dheelitirnaan iyo qaab-dhismeed hagaagsan - taas oo iyaduna sababi karta waxqabadyo maalmeedka sida fadhiga, foorarsiga iyo kor u qaadista fudud. Haddii aad u maleyneyso in maalin kasta wax yar ka hesho lakabka ugu culus - markaa waxaan kugula talineynaa inaad isku daydo inaad sameyso seddex jeer usbuucii. Waxaan kuu rajeyneynaa jimicsi aad u fiican!
Fiidiyow: Guddiyada Cayayaanka
Fiidiyow: Guddiyada dhinaca
(Raac oo faallo ka bixi haddii aad rabto inaad noo sameyso fiidyow jimicsi gaar ah leh ama fidsan dhibaatadaada gaarka ah. Waxaan halkaan u joognaa inaan ku caawino.)
(Waxaan isku dayeynaa inaan ka jawaabno dhammaan fariimaha iyo su'aalaha 24-48 saacadood gudahood. Waxaan sidoo kale kaa caawin karnaa inaad tarjunto sharaxaad caafimaad, jawaabaha MRI iyo wixii la mid ah.)
Tags: qorsheysan, tababarka
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Planken.jpg?media=1648573622 504 700 waxyeelladayda https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 waxyeelladayda2016-02-27 15:20:432020-03-01 18:35:555 Faa'iidooyinka caafimaad adoo sameeynaya qashin-qubka
Caymiska caafimaadka / caymiska daaweynta: Dulmarka guud ee jilayaasha. - Hal galaas oo biir ah ama khamri maalintii ah ayaa siiya qaab dhismeedka lafta oo xoog badan!